डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी लिन सकिन्छ सस्ताेमा अनलिमिटेड डाटा – BikashNews
डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी लिन सकिन्छ सस्ताेमा अनलिमिटेड डाटा
२०७६ चैत ९ गते १५:५२ विकासन्युज
काठमाडाैं । डाटा प्याक सकिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका वान आवर अनलिमिटेड प्याक, अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक लगायत अफरहरु सस्तोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
वान आवर अनलिमिटेड प्याकमा एक घण्टासम्म डाटा चलाउन, भ्वाइस कल गर्न वा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । जम्मा २० रुपैयाँमै यो प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसबाट एक घण्टासम्म जति पनि डाटा चलाउन वा कुराकानी गर्न पाइने छ ।